एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्ड लिमिटेडको दर्ता प्रकृयाको प्रारम्भ - Artha Path Artha Path
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को पहलमा स्थापना हुन लागेको एन.आर.एन डेभलपमेन्ट फन्डको प्रबन्धपत्र नियमावली तथा कम्पनी दर्ता कागजातमा हस्ताक्षर भएको छ । काठमाडौँमा उपलब्ध संस्थापकहरूका तर्फबाट आज हस्ताक्षर भएको हो । सो अवसरमा गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्त, गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष डा। उपेन्द्र महतो, पूर्व अध्यक्ष तथा संरक्षक जीवा लामिछाने, उपाध्यक्षद्वय डा. बद्री केसी र सोनाम लामा, कोषाध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठ, सल्लाहकार हरिबोल भण्डारी लगायत डा. खगेन्द्र जीसी, चिरञ्जिीवी थापाले प्रबन्ध पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । यो कम्पनीमार्फत नै नेपालमा कम्तिमा १० अर्ब लगानी भित्र्याउने तयारी छ । १० अर्ब लगानीका लागि हालसम्म डेढ अर्ब भन्दा बढी रकमको प्रतिबद्धता आइसकेको छ ।
हस्ताक्षर समारोहमा संस्थापक अध्यक्ष डा। उपेन्द्र महतोले गैरआवासीय नेपालीले देखेको सपना छिट्टै पूरा हुन लागेको बताउनुभयो । कम्पनी दर्ताका लागि औपचारिक रुपमा मिलेको सहमतिहरुले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई उत्साहित बनाएको उहाँको भनाई थियो । नेपालमा लगानी गर्नका लागि यसले बाटो खुला गरेको उहाँले बताउनुभयो । कुनैपनि देशको समृद्धिका लागि सामुहिक लगानी आवश्यक भएकोले यस अभियानमार्फत विश्वभरका हरेक नेपालीले व्यक्तिगत लगानी गरेर नेपालको विकास र समृद्धिमा योगदान गर्न सक्ने उहाँको भनाई थियो । उहाँले मन खोलेर नेपालमा लगानी गर्नका लागि आग्रह समेत गर्नुभयो । नेपालमै पहिलो पटक यस्तो ठूलो राशीको लगानी हुन लागेको भन्दै उहाँले यो सुरुवातले गैरआवासीय नेपालीले अपनत्व महसुस गर्न पाउने बताउनुभयो ।
यस्तै अध्यक्ष कुमार पन्तले नेपालका लागि बहुप्रतिक्षित र ऐतिहासिक दिन भन्दै गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको समृद्धिका लागि योगदान गर्ने बाटो खुलेको बताउनुभयो । स्वदेशको विकास र समृद्धिमा योगदान गर्ने अभियानअन्तर्गतको एक महत्वपूर्ण योजनाले लामो समयको प्रयासपछि मूर्तरूप प्राप्त गर्ने चरणमा पुगेको भन्दै उहाँले खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।
विश्वको दोश्रो अग्लो ‘माउन्ट के टू’ आरोहण गर्ने पुर्जाको टोलीलाई परिसंघको बधाई तथा स्वागत
विश्व कीर्तिमान कायम गरि नेपालको नाम विश्वभर फैलाएकोले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ख’ बर्गको ईजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले
रु रु जलविद्युतको आईपीओमा आजदेखि निष्काशन, आवेदन कसरी दिने ?
काठमाडौं । रु रु जलविद्युत परियोजनाले आज (फागुन ७ गत)देखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला
ग्रीनलाइफ हाइड्रोपावरको आइपीओ बाँडफाँड, २ जनाले ११ कित्ता पाए,१० लाख ९११ जना आवेदकको हात खाली
काठमाडौं । ग्रीनलाइफ हाइड्रोपावरको आइपीओ फागुन ७ गते, शुक्रबार बाँडफाँड गरिएको छ । आवेदन दिएका